Global Voices teny Malagasy » Maniry Hanomboka Ny Fandikàna Ny Fiteninao Amin’ny Informatika Ve Ianao ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Maniry Hanomboka Ny Fandikàna Ny Fiteninao Amin'ny Informatika Ve Ianao ?
Voadika ny 24 Mey 2017 6:39 GMT 1	 · Mpanoratra Derek Lackaff Nandika Nancy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Amerika Latina, Azia Afovoany sy Kaokazy, Azia Atsimo, Azia Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Karaiba, Oseania, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Ady ho an'i Wesnoth (fametrahana an-tsarintany gaelika any Ekaosy). Sary nindramina tamin'ny iGàidhlig.net , © 2017 Ady ho an'i Wesnoth, lisansa GPLv2+ .
Navoaka tao amin'ny r12n  ny dika  voalohan'ity lahatsoratra ity.
GunChleoc  dia Mpiandraikitra ( lehibenà tetikasa) ho an'ilay lalao paikady Widelands  sady manampahaizana manokana momba ny rindambaiko maimaimpoana fametrahana ho an-tsarintany.. Ireto ny toroheviny momba ny fanombohana ny fametrahana ho an-tsarintany ho an'ny fitenin'ireo mpiteny vitsivitsy :
1. Mandikà rindrambaiko maimaimpoana 
Mora kokoa ny hampidirana ny ova momba anao, sady afaka mifandray mivantana amin'ireo mpamorona rindrambaiko ianao raha tojo olana. Mora kokoa amin'ny ankapobeny ny ahafahana manandrana ny fandikànteninao.
2. Rehefa mijery ampahanà ridrambaiko maimaimpoana, hamarino tsara fa manana mpamorona rindrambaiko mavitrika sy vondronà mpampiasa izy.
Amin'izay azonao antoka fa hisy fanavaozana rindrambaiko izay mety ahitàna ny fiteninao any aoriana. Hamarino raha mety ny fandehan'ny fandikànteniny, sintony ary ataovy izay hahazoana antoka fa tianao ilay izy. Tena mahasorena ny mandika zavatra tsy tiana. Ary koa, ny rindrambaiko azo ampiasaina amin'ny sehatra maro ( Linux, MacOS, Windows) no tsara indrindra.
3. Atombohy amin'ny zavatra kely .
Mifidiana sombiny tsy betsaka rohy amin'ilay rindrambaiko. Tsy mampatahotra loatra io fomba io, ary vetivety kokoa ianao dia afaka mifaly amin'ny asa vita. Avy eo mikisaha any amina tetikasa mora hita toy ny Firefox.
4. Adikao ny ampahanà rindrambaiko izay tianao ampiasaina.
Amin'io fomba io no ahitanao mora foana ireo hadisoana sy ahafahanao mitsara ireny satria ampiasainao izy. Afaka maka sombin-drindrambaiko izay takian'ireo vondrom-piarahamonina mitovy fiteny aminao ihany koa ianao, nefa aza atao betsaka loatra mandra-pahazonao traikefa kely ao am-paosinao. Na raha toa ka lehibe loatra nefa tianao ilay izy, dia anontanio ireo mpamorona rindrambaiko raha mety ny handikàna na dia ireo rohy tena ilaina fotsiny aza, toy ny fidirana amin'ny ‘menu’.
5. Tandremo ny voambolana avy amin'ny rohy miteny Anglisy.
Zavatra roa mitovy ny “Log in” sy ny “Sign in”, tahaka ny ” répertoire” sy ny “fichier” ao amin'ny kapila mafinao. Ny sasany amin'ireo voambolana ireo dia avy amin'ny tantaran'ny informatika, ka tsy ilaina kitihina. Alohan'ny hanaovana azy, jereo tsara fa tokony midika zavatra iray ireo teny anglisy roa ireo.
6. Mitadiava olona hafa hiresahanao momba ny olana madinika amin'ny fandikànteny sy ireo voambolana vaovao.
Raha toa ka mahita olona afaka hiaraka aminao ianao amin'io ezaka fandikanao rindrambaiko io, vao mainka tsara.
7. Mampiasà mpitahiry teny voadika .
Tetikasa maro no adika amin'ny sehatry ny aterineto izay efa manana mpitahiry teny voadika voaforona niaraka taminy, fa azonao ampiasaina ihany koa ny fitaovana maimaim-poana ivelan'ny aterineto toy ny Virtaal  na ny Poedit . Indrindra, rehefa manomboka miasa amina tetikasa maro rantsana ianao, ny fanànanao ny zavatra maro ao anaty mpitahiry teny voadikanao dia hanampy anao amin'ny fitazonana ny firindràna sy ny fanafaingànana ny fandikànteny, satria tsy voatery hitendry ny dika teninao ho an'ny “OK” in-jato amin'arivo ianao. Izy roa miaraka no ampiasaiko, nefa tsy adinoko ny misintona ny zavatra rehetra sy mamahana tsy tapaka ny Virtaal.
8. Rehefa mila fanohanana amin'ny endriny maro samihafa aho, dia lalaoviko foana ny karatra ” mila an'io ihany koa ny Rosiana”, mba hisorohana ny valinteny tsy ampoizina ” Tsy ilaina ny miasa ho an'ny fiteninao tsy mankaiza.”
Rehefa mitaky izay zavatra ilainao ho amin'ny fiteninao ianao, aza adino mandrakariva ny fahalalàm-pomba — ny ankamaroan'ireo mpamorona rindrambaiko maimaimpoana dia manao izany ho toy ny fialamboliny amin'ny fotoana malalaka. Noho izany, tena zava-dehibe ny mitandro ny fihavanana sy tontolo mahafinaritra ho an'ny tsirairay, (tsy milaza izany fa tsy tokony hahafinaritra sy tsy hisy fifandraisana any amin'ny toeram-piasàna…). Ankoatra izany, dia sahirana mandrakariva ireo mpanamboatra rindrambaiko manitsy ireo hadisoana maro sy ireo fampiharana tiany hapetraka rehefa misy fotoana malalaka. Noho izany, manàna faharetana ary alefaso tsindraindray ny fampatsiahivana arahana fahalalam-pomba rehefa ilainao.
9. Mamorona angon-drakitra rakibolana azon'ny be sy ny maro jerena.
Raha toa ianao ka tsy manana fahaizamanao ara-teknika, dia hanampy anao hahafahanao manomboka ny ‘tableur’, fa ny tena angon-drakitra no ho tsara kokoa any aoriana any. Hanampy anao amin'ny fitazonana ny firindràna izany sady hanampy ireo mpisera amin'ny asanao rehefa manontany tena ny amin'izay dikan'ny voambolana vaovao ry zareo. Tena zava-dehibe amin'ny mpisera ny firindràna, raha tsy izany dia mampifangaro zavatra izy ireo. Ohatra, ny teny hoe “Log in” dia misy dikany anankiroa amin'ny teny Alemàna, iray amin'izany ny (anmelden) izay mety hidika hoe ” firaketana ” amin'ny dikanteny samihafa. Tsy tsara izany.
10. Tanisao ao amin'ny haban-tranonkala iray ny rindrambaiko misy ny fiteninao, mba hahafahan'ny olona mahita azy.
Topazo maso ny iGàidhlig  hahafantarana hoe tahaka ny ahoana ilay tranonkala. Arakaraky ny toerana misy ny fiteninao, ny toromarika momba ny fametrahana ny fitendry sy ny tarehintsoratra dia mety ho ilaina ihany koa. Raha afaka miara-miasa amin'ny olona mahay miasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy mahay mivarotra ianao, tsara.
11. Rehefa nahazo traikefa ianao, ampidiro ao amin'ny Lisitry ny angondrakitry ny Unicode Common Locale ny fiteninao
Hanampy amin'ny fametrahana ny fiteninao ao amin'ny sarintany informatika izany, sady zavatra takiana raha mihevitra ny hametraka ny fiteninao amin'ny fitaovana finday ianao. Tsy maintsy omenao ilay angondrakitra, ary dia ho asa fandikànteny iray hafa ( mahafinaritra) iny.
12. Tsarovy fa sady ilaina no mampiala voly ny fandikàna teny !
Tohizo tsikelikely fotsiny dia ho vitanao ny fandikànteninao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/24/98366/
 lalao paikady Widelands: https://wl.widelands.org/
 rindrambaiko maimaimpoana: https://www.fsf.org/about/what-is-free-software
 ova : https://en.wikipedia.org/wiki/Locale_%28computer_software%29
 mpitahiry teny voadika: https://en.wikipedia.org/wiki/Translation_memory
 Lisitry ny angondrakitry ny Unicode Common Locale : http://cldr.unicode.org/